Pompeo oo loo idmaday in uu dublamaasiyadda Maraykanka hoggaamiyo - BBC News Somali
Pompeo oo loo idmaday in uu dublamaasiyadda Maraykanka hoggaamiyo
Lahaanshaha sawirka SARAH SANDERS/TWITTER
Image caption Pompeo ayaa si qarsoodi ah ula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishan horraanteedii
Aqalka sare ee baarlamaanka Maraykanka ayaa ansixiyay in madaxii hore ee hay'adda sirdoonka Maraykan ee CIA in uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda, iyada oo ay sidaas ku soo afjarantay dagaal adag oo ansixintiisa ku saabsanaa.
Xisbiga dimuqraadiga ayaa Pompeo ku eedeeyay in uu yahay qof dagaal jecel oo ay dhaamisay Muslim nacayb iyo waxyaabo kale.
Waxaa fadhigan soo xaadiray 57 xubnood waxaana magacaabistiisa ka raali noqday 42 xubnood, isaga oo sidaas ku noqday wasiirkii arrimo dibadeed ee labaad, inta uu xilka hayo madaxweyne Trump.
Rex Tillerson oo ah ninka uu badalayo ayaa la eryay bishii hore iyadoo madaxweynuhu uu ku shaaciyay arrintaas Twitter-ka, waxaana markaas taagnayd kala aragti duwanaansho shaqsi ah oo labada masuul dhextaalay.
Senatarrada Jamhuuriga oo aqlabiyad ka ah Aqalka sare ayaa aqlabiyad ku ansixiyay Pompeo maalintii Khamiista, waxaa kale oo uu codka ka helay lix xildhibaan oo xisbiga Dimuqraadiga ah ka tirsan.
Guddiga Senate-ka Mareykanka ee Xiriirka Dibadda oo meelmariyay Pompeo
Qaar ka mid ah xildhibaanadaas xisbiga Dimuqraadiga ah ka tirsan waxaa ka mid ah Joe Manchin oo laga soo doorto gobolka West Virginia iyo Heidi Heitkamp oo laga soo doorto North Dakota kuwaas oo ah gobolladii uu ku guulaystay madaxweyne Donald Trump doorashadii 2016kii.